Motorola Droid Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Motorola Droid
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Motorola Droid
Waxaan soo kaban karaa sawiro ka Motorola Droid?
Accidentially waxaan sawiro ilmaha tirtiray ka Motorola Droid!
rajo? Waxaan fahamsanahay ma jirto "qashin" dareenka soo jireenka ah ee erayga. layga xiri?
Haddii aad rabto in aad soo kabsado photos lumay ka Motorola Droid, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la ogaado waa in ay joojiyaan isticmaalka telefoonka in ay toogtaan sawirada la joogo marka aad ka heli khasaaro sawir. Taasi waa muhiim, ee photos lumay aan si dhab ah ugu tagtay marka aad la tirtiro. Kaliya meesha ay degan waxa lagu calaamadiyaa sida isticmaali karo for files cusub. Sidaa darteed, waxaad u soo kaban karto sawiro tirtiray ka Motorola Droid ka hor ay overwritten by files cusub.
Si aad u soo kabsado files tirtiray ka Samsung Captivate, marka hore waxaad u baahan tahay dib u soo kabashada Samsung Captivate qalab. Weli wax fikrad ah? Halkan aan soo jeediyo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Ma sawiro oo kaliya laakiin video iyo maqal ah files ka Motorola Droid soo kabsado, iyadoo aan loo eegayn waxaad iyaga waayay tirtirka, formating ama sababo kale.
Isku day version maxkamad free of this software Motorola kabashada Droid hadda hoos ku qoran.
Hadda waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) inuu ka soo kabsado sawiro iyo video ka card SD gudaha Motorola Droid. Waxaad ku xidhi kartaa Motorola Droid in computer iyo ordi qalab si aad u iskaan u videos lumay iyo sawiro si toos ah.
Sidee inuu ka soo kabsado photos lumay ka Motorola Droid
Step1. Connect aad Motorola Droid in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan Motorola Droid in kombiyuutarka la cable USB ah iyo in la hubiyo waxa lagu ogaan karaa si guul leh oo u muuqata sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" furmo suuqa hoose soo socda.
Step2. Baarista Motorola Droid for photos lumay
Tallaabada 2 waa in ay doortaan aad Motorola Droid in interface hoose oo guji "Scan" si ay u baadhaan photos lumay, video iyo files audio.
Haddii aad rabto in aad kaliya photos dib lumay, waxaad u qeexi karaan natiijada scan iyadoo la isticmaalayo "Filter Options" si ay u doortaan "Photo".
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files lumay ka Motorola Droid
Ugu dambeyntii, waxaad ku eegaan karo oo calaamadee dhammaan faylasha recoverable sawirka kadib. Dooro kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ah ee aad taleefan Motorola Droid. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada sawir Motorola Droid
Top 5 YouTube Music Downloader u Android